Rocket Lake ပြီးနောက် CPU မှော်ကိုပြန်လည်ရယူရန်အတွက် Desktop တွင် Intel လုပ်ရမည့်အရာ ၅ ခု
Rocket Lake ပြီးနောက် CPU မှော်ကိုပြန်လည်ရယူရန်အတွက် Desktop တွင် Intel လုပ်ရမည့်အရာ (၅) ခု
ငါတို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပျက်နေရင်စီးပွားရေးကိုမထုတ်ချင်ဘူး၊ လွန်ခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း AMD နှင့်၎င်း၏ Ryzen lineup ကွင်းဆက်သည် Intel နှင့်၎င်း၏ Desktop CPU Core
ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်သင်အကြိမ်အနည်းငယ်အကြိမ်ဖတ်ခဲ့သည့်နိဒါန်းကိုကျော်သွားလိမ့်မည်။ ပြီးတော့ Intel ကပြိုင်ပွဲထဲပြန်ဝင်တော့မယ်လို့ထင်နေသလိုပဲ Sneaker ထဲမှာဆက်ပြီးရိုက်နေတုန်းပဲ။
ကုမ္ပဏီ၏နောက်ဆုံးပေါ်ပရိုဆက်ဆာထုတ်လုပ်မှုဖြစ်သော ၁၁ ကြိမ်မြောက် "Rocket Lake" Core series သည်အများစုအတွက်ဝေဖန်မှုများခံခဲ့ရသည် ( ငါတို့တို့တွင်
) ။ Intel သည်အင်ပါယာစတိတ်အဆောက်အအုံကိုအမှန်တကယ်စွန့်လွှတ်ရန်လိုအပ်သည့်အချိန်တွင်မှန်သည်ကွဲသွားပြီးလူတိုင်းကထင်ယောင်ထင်မှားကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။
ဒါဆိုရင် Rocket Lake ပစ်လွှတ်မှုမှဖုန်မှုန့်တွေကျလာပြီး 11th gen kernel အပေါ်မူတည်ပြီးစီရင်ချက်ချလိုက်ပြီဆိုရင် Intel ကဘာတွေဆက်ပြေးနိုင်မှာလဲ။နှစ်ဖက်စလုံးမှဖိအားများပိုမိုမြင့်တက်လာခြင်းနှင့်အတူ desktop processor များလား။ Ryzen နှင့်အတူ ၇ နာနိုမီတာနည်းပညာကို AMD တွင်မြဲမြံနေဆဲဖြစ်သည်။ ပြီးတော့အက်ပလီကေးရှင်း X အချက်ပြမှုနဲ့သူ့ရဲ့ M1 ပရိုဆက်ဆာတွေလက်ပ်တော့မှာတွေ့ရပြီ။ Intel သည်မကြာမီအရေးယူရမည်။ CPU World မှာမြန်မြန်ဘာမှမဖြစ်၊ chipmaker လုပ်သောနည်းပညာအလောင်းအစားများသည်နှစ်များအတွင်းလခပေးသည်သို့မဟုတ်ကျသည်။ ဒါပေမယ့်ဒီနေရာမှာစံပြကမ္ဘာတစ်ခုအတွက်လှုပ်ရှားမှုအစီအစဉ်တစ်ခုပါ။
၁ ။ ၁၄ နမ်မှထွက်ပါ။
သိသာသောအရာများနဲ့စကြရအောင်။ Intel၊ ၁၁ ကြိမ်မြောက်မျိုးဆက်သစ်ကိုမသုံးပါနှင့်။ Rocket Lake နှင့်အတူကြေငြာခဲ့သော 10th Gen“ Comet Lake Refresh” သည် Intel ၏ဘတ်ဂျက်ပရိုဆက်ဆာထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားကိုမြှင့်တင်ရန်ရည်ရွယ်ထားသော 10th Gen Pentium နှင့် Core i3 ချစ်ပ်များတွင်အနည်းငယ်တိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ စစ်မှန်သောပရိုဆက်ဆာအသစ်များမရှိပါamily,fဒုံးပျံအိုင်၌ EN အနိမ့်အဆုံး။
Comet Lake Refresh သည် desktop processor ဈေးကွက်၏အကြီးမားဆုံးအပိုင်းဖြစ်သောအလယ်အလတ်နှင့်နိမ့်ဆုံးပရိုဆက်ဆာများကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်ကြိုးပမ်းမှုကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ကုမ္ပဏီမဟုတ်ကြောင်းမျှော်လင့်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီ၏ ၁၂ မျိုးဆက် 10nm ပရိုဆက်ဆာစီးရီး“ Alder Lake” ကိုယခုနှစ်အကုန်ပိုင်းတွင်ဖြန့်ချိသောအခါ Core i5-11600K ကဲ့သို့သောမော်ဒယ်များကို“ အသစ်တင်” ရန်မလို။
Intel က 14nm lithography ကိုအခြေခံပြီးပရိုဆက်ဆာကိုစတင်ထုတ်လုပ်တာခုနစ်နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးရွေ့ဖို့အချိန်ရောက်လာပြီ နည်းပညာ၊ စျေးကွက်နှင့်အင်ဂျင်နီယာရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်၊ Core i9-11900K
စတင်ခြင်းက Intel အင်ဂျင်နီယာများသည် 14nm ဖြစ်စဉ်ကို backport လုပ်ထားတဲ့ 10nm "Ice Lake" cores များတောင်မှအင်ဂျင်နီယာများအနေဖြင့်၎င်းကိုသင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းပြသထားတယ် လုပ်ဖို့လိုသည်10th Gen လိုင်း၏ 10-core ချစ်ပ်ကိုယခုအခါရှစ်ခုသို့ပြောင်းလိုက်ခြင်းသည်ကန့်သတ်ချက်များရှိနေပြီဖြစ်သည်။
ကံကောင်းထောက်မစွာပဲ Intel သည်၎င်း၏ 10nm ဒီဇိုင်းသစ်တွင်အနာဂတ်ပရိုဆက်ဆာများအားလုံးထုတ်လွှတ်ရန်၎င်း၏လမ်းပြမြေပုံကိုအပြည့်အဝကတိပြုထားပုံရသည်။ စီအီးအိုအသစ် Pat Gelsinger သည်မကြာသေးမီကပင်၎င်း၏ $ 20 ဘီလီယံကုမ္ပဏီ၏အရီဇိုးနားစက်ရုံတွင် 7nm
(ပုံတွင်ဖော်ပြထားသော Cred image: Intel)
Intel ဟာတစ်ချိန်တည်းမှာချစ်ပ်များကိုတည်ဆောက်လိမ့်မယ်။ ၄ င်း၏ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းများနှင့်အခြားဖောက်သည်များအတွက် ၄ င်းသည်“ Intel Foundry Services” ကွန်ယက်ဟုခေါ်သည့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာစက်ရုံများနှင့်တိုင်ဝမ် Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ကဲ့သို့သောပြင်ပစက်ရုံများနှင့်အလားအလာရှိသောမိတ်ဖက်များဖြစ်သည်။ အမြတ်အစွန်းသာလျှင် Intel သည်သူကိုယ်တိုင်ပြန်လည်တည်ထောင်ရန်လိုအပ်သည့်အခြေခံကိုပေးနိုင်သည့်အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ဒီဇိုင်း၊ နည်းပညာ၊ ထုတ်လုပ်မှုနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များစသည့်နယ်ပယ်များ၌ desktop processors များတွင် AMD နှင့်ပိုမိုယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်အနေအထားကိုထင်ဟပ်စေသောလမ်းပြမြေပုံပေါ်တွင်တင်ပါ။ ။
၂။ PC-Gaming Supremacy ကိုပြန်လည်ပေါင်းစည်းခြင်း
Intel က Rocket Lake ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့်တောင်မှတစ်ခုတည်းသောစွမ်းဆောင်ချက်ကိုသက်သေပြနိုင်ခဲ့သည်။ threaded တွက်ချက်မှု။ 14nm နည်းပညာအကြွေးသည်၎င်း၏တံစို့များနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော်လည်း Intel သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းကုမ္ပဏီ၏အလယ်အလတ်တန်းစားနှင့်အဆင့်မြင့်သောကမ်းလှမ်းချက်များနှင့်အတူဂိမ်းများတွင် frame frame နှုန်းအမြင့်ဆုံးရရှိရန်ပြproblemနာမရှိခဲ့ပါ။ ၎င်းပရိုဆက်ဆာများသည် discrete system နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ Ryz fr95900X
) လူကြိုက်များတဲ့ဂိမ်းတော်တော်များများမှာ Intel Core i9-11900K ပရိုဆက်ဆာကိုရိုက်သည်။ ၎င်းသည်ထပ်ပေါင်းထည့်ထားသော cores အရေအတွက်နှင့်အတူပိုမိုခက်ခဲရန်လိုအပ်သောလုပ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
AMD က၎င်း၏ဇင်ဗိသုကာကို Intel မှမည်သည့်ပျော့ပျောင်းသောအစက်အပြောက်ကိုမဆိုထိထိရောက်ရောက်လှန်လှန်နိုင်အောင်ပြုပြင်ပေးခဲ့သည်တောင်းဆိုမှုအပေါ်ပုံ။ Intel Core i5-11600K
အခုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့သော 11th Gen Rocket Lake lineup တွင်ပရိုဆက်ဆာနှစ်မျိုးအနက်မှ Intel သည်ဂိမ်းကစားခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်မှုအားထိန်းသိမ်းရန်အတွက်အကောင်းဆုံးသောအရာဖြစ်သည်။ ခေါင်းဆောင်မှုအနေအထား။ Desktop gaming တွင် AMD ခြိမ်းခြောက်သော ဦး ဆောင်မှုကို Intel ပြန်လည်ရရှိရန် Intel Alder Lake ကတတ်နိုင်သမျှလုပ်ရမည်။ 12th Gen Intel သို့မဟုတ် AMD Zen4အကြောင်းပိုမိုသိရှိလာသည်နှင့်အမျှဤတိုက်ပွဲသည်မည်သို့ထွက်ပေါ်လာမည်ကိုအသေအချာမပြောနိုင်ပါ။ Intel ၏တုံ့ပြန်မှုကိုယခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင်မျှော်လင့်ရသည်။ ကျနော်တို့ AMDs နှင့်ပတ်သက်။ မသေချာဘူး
အခုအချိန်မှာတော့ရှင်းနေပါတယ်၊ AMD ရဲ့ Ryzen 5000 ဟာဘတ်ဂျက်၊ အပူ၊ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကိုဂရုစိုက်တဲ့ဂိမ်းကစားသူတွေအတွက်တူညီတဲ့သို့မဟုတ်ပိုကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်သင်သိထားသည့်မြင့်မားသောဘောင်နှုန်းများလည်း!
၃ ။ ခဏစောင့်ကြည့်ပါ။အချိန်
AMD desktop ပရိုဆက်ဆာများနှင့် Intel ပရိုဆက်ဆာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်တန်ဖိုးသိပ်မများသည့်အဓိကနယ်ပယ်မှာ `မွေးစားစရိတ် 'ဟုလူသိများသည်။ စွမ်းအင်ပြည့်ဝသောပရိုဆက်ဆာထည့်သွင်းရန်သင်၏ PC စွမ်းအားကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်လိုအပ်သည်၊ အဆင့်မြှင့်ထားသော chipset နှင့် processor socket အသစ်နှင့်အတူလိုက်လျောညီထွေဖြစ်ရန် motherboard အသစ်တစ်ခုကိုဝယ်ယူရန်ဖြစ်နိုင်သည်။
AMD သည် Ryzen ပရိုဆက်ဆာအသစ်များကို၎င်း၏ Zen ဗိသုကာလက်အောက်တွင်ပုံမှန်လေးနှစ်ကျော်ပုံမှန်ထုတ်ပေးသည်။ ထို့အပြင် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်ဖြန့်ချိခဲ့သော Ryzen95900X ကဲ့သို့သောမျိုးဆက်သစ်ပရိုဆက်ဆာများကိုလည်းတွေ့နိုင်သည်။ ၎င်းသည်မှန်ကန်သောကဒ်ပြားပုံစံနှင့်မှန်ကန်သော BIOS update နှင့်အတူ 2017 ခုနှစ်တွင်ထုတ်ဝေသော B350 motherboard တွင်နည်းပညာအရအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။
အခုအာမခံချက်မရှိတော့ပါ။ ကွဲပြားခြားနားသော Motherboard ထုတ်လုပ်သူများ နှင့် in ကြားတွင်အခြေအနေသည်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသော
သင်အသုံးပြုလိုသော Ryzen processor အတိအကျပေါ်မူတည်သည်။ သို့သော်ယေဘူယျအားဖြင့် AMD ၏ Socket AM4 သည် chipsets နှင့် sockets များ၏နောက်ပြန်ကိုက်ညီမှုကိုပေးထားပြီး Intel သည်ယှဉ်ပြိုင်ရန်ရုန်းကန်နေရုံသာမကတက်ကြွစွာဆန့်ကျင်နေပုံရသည်။
မျိုးဆက်နှစ်ခု sockets cadence သည် Intel အတွက်အသစ်အဆန်းမဟုတ်ပါ။ AMD သည် AM4 နှင့်လိုက်ဖက်သည့် desktop ပရိုဆက်ဆာများထုတ်လုပ်သည့်လေးနှစ်တာကာလအတွင်း Intel သည် sockets နှစ်ခုဖြင့်ဖြတ်သန်းသွားခဲ့သည်။ နောက်ထပ် socket အသစ် (LGA 1700) Alder Lake ကိုယခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင်ရောင်းချရန်သတ်မှတ်ထားသည်။
Intel ၏ချဉ်းကပ်ပုံသည်အရွယ်အစားကြီးမားသည့် Motherboard ပလက်ဖောင်း၏စိတ်ကူးကိုလုံးဝနီးပါးဖြစ်စေသည်။ AMD သည်အစွမ်းကုန် ၀ ယ်သူအမြောက်အများကိုကမ္ဘာပေါ်သို့အတတ်နိုင်ဆုံးပို့ဆောင်နေစဉ် Zen ဂေဟစနစ်။
AMD ကနောက်ဆုံးပေါ်အဆင့်မြင့်နည်းပညာပရိုဆက်ဆာများကိုတောင်မှခတွင်ထောက်ခံကြောင်းပြသခဲ့သည်ကဒ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအကြားနည်းပညာအလိုအလျောက်နှင့်သဘောတူညီချက်တစ်ခုရှိပါကသက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်အဆင်ပြေပါသည်။ ထို့ကြောင့် Intel သည်ကလေးမွေးစားခြင်း၏ကုန်ကျစရိတ်အရယှဉ်ပြိုင်ရန်ဆိုလျှင် socket dance ကိုချိုးနှိမ်ရန်နည်းလမ်းနှစ်ဆင့်နှင့်လျင်မြန်စွာရှာဖွေရန်လိုအပ်သည်။
၄။ AMD စံနှုန်းများနဲ့ဂရပ်ဖစ်များကိုပေါင်းစပ်ထားပါ။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းအလယ်အလတ်မှစားနိူင်သည့် desktop ပရိုဆက်ဆာစျေးကွက်သည် desktop ချစ်ပ်ရောင်းချမှု၏ကြီးမားသောဝေစုကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ။ ပေါင်းစည်းထားသောဂရပ်ဖစ်ပါသည့်ပရိုဆက်ဆာများစွာရှိပါသည်။ မကြာသေးမီအချိန်အထိ Intel ၏ပရိုဆက်ဆာများက၎င်း၏ပေါင်းစပ်ထားသော silicon UHD Graphics poky နှင့် utility (များသောအားဖြင့် UHD 630 or 600) ဖြင့်လွှမ်းမိုးခဲ့သည်။ သူတို့ကိုသူတို့ကိုဂရပ်ဖစ်ပရိုဆက်ဆာ (IGPs) လို့ခေါ်တယ်။ များစွာသောဘတ်ဂျက် ၀ ယ်သူများသည်၎င်းတို့အားအိမ်ပြန်ကြသည်။
ဒီပရိုဆက်ဆာအမျိုးအစားများသည် OEM / system builder ဈေးကွက်အတွက်အလွန်ရေပန်းစားသည်။ဘတ်ဂျက်နိမ့်ကျသောကွန်ပျူတာများသည်ရုံးလုပ်ငန်းအတွက်ပုံမှန်အားဖြင့်စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်သော desktop PC ကိုလွယ်လွယ်ကူကူရစေနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုအခါ IGP ကောင်းတစ်ခုသည်ရုတ်တရက်၊ အထူးသဖြင့် ၂၀၂၁ တွင်ဂရပ်ဖစ်ကတ်များ၏ဈေးနှုန်းများမြင့်တက်လာခြင်းနှင့်အတူအထူးအရေးကြီးသည်။ သို့သော် PC gamers များစွာသည်တင်းကျပ်သောဘတ်ဂျက်များရှိကြသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် UHD Graphics IGP သို့မဟုတ် AMD ချစ်ပ်ပါသည့် Intel ပရိုဆက်ဆာတစ်ခုသည်သင်ကစားနိုင်သည့်သို့မဟုတ်ဘာမှမရှိသည့် desktop PC ကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားစေသည်။
Core i5-11600K ရှိ IGP ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ Rocket Lake chip စမ်းသပ်မှုများမှနောက်ထပ်ဂရပ်တစ်ခုသို့ပြန်သွားကြပါစို့။ ဤစျေးကွက်ကဏ္အတွက်ကြယ်ပွင့် Ryzen53400G
သည်၎င်း၏ပေါင်းစည်းထားသည့် Radeon RX Vega 11 IGP ...
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောဂရပ်၏ဇယားကွက်များမှမြင်နိုင်သောအတိုင်းအတာကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သိသာသည်၎င်း၏ chip ကိုတိုးတက်အောင်အတွက်ကြီးစွာသောအပြင်းအထန်လုပ်ဆောင်တော်မူပြီ။ ဂရပ်ဖစ်ဗိသုကာ။ Rocket Lake အကွာအဝေးသည်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သည်Intel ၏ Iris Xe ဂရပ်ဖစ်အသစ်ကိုပေါင်းစပ်ရန် desktop ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် UHD ဂရပ်ဖစ်ကြားခံအသစ် UHD ၇၅၀ နှင့်အမှုကိစ္စအများစုတွင်ဖြစ်သည်။ (Iris Xe သည် ၁၁ ကြိမ်မြောက် Ligops ၏“ Tiger Lake” မိုဘိုင်းပရိုဆက်ဆာတွင်စတင်ပေါ်ပေါက်လာသည်။ ထိုအရာသည်ထင်ရှားပေါ်လွင်သည်။ ) Intel Cor IGP i5-11600K စမ်းသပ်မှုများ၌ (ချစ်ပ်အသစ်ဖြင့်တပ်ဆင်ထားသောချစ်ပ်နှင့်အတူ) ရမှတ်များနှင့်ဘောင်နှုန်းရလဒ်များစွာတွေ့ရှိရသည်။ Iris Xe UHD Graphics 750 IGP သည်ယခင်မျိုးဆက်များ၏နှစ်ဆဖြစ်သည်။
ဒါဟာ Intel အတွက်ကြီးမားတဲ့သဘောတူညီမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ AMD ရဲ့ Ryzen လိုင်းချစ်ပ်အများစုမှာ IGP မရှိတဲ့အတွက်အလုပ်လုပ်ဖို့ဗွီဒီယိုကဒ်တစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ IGP ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်မှုဟာအစကောင်းပေမယ့် Ryzen53400G
Ryzen53400G ရှိ AMD ရဲ့ Ryzen IGP နဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်တော့ဖျော့ဖျော့ရှိနေဆဲပါ။ 2019 ခုနှစ်တွင်။
AMD တွင် IGP တပ်ဆင်ထားသောချစ်ပ်များရှိသည်ငါတို့ပိုက်ဆံအိတ်။ (သူတို့ကို G-Series ဟုလည်းခေါ်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်
ဈေးနှုန်းဟာသူတို့ရဲ့စျေးနှုန်းနဲ့နီးစပ်တဲ့စျေးနှုန်းများ (ဖြန့်ချိချိန်မှာဒေါ်လာ ၁၄၉ နဲ့ ၉၉)၊ သူတို့ဟာစျေးသိပ်မကြီးတဲ့ဂိမ်းကစားသူတွေအတွက်ကောင်းကောင်းနားမလည်ကြဘူး။ ထို့အပြင် ၂၀၂၁ တွင် Ryzen 5000 မှဤ G ချစ်ပ်များ refresh လုပ်ရန်မျှော်လင့်သည်။ သူတို့ခေါက်တဲ့အခါ Iris Xe ကိုကြည့်ပါ။
၅။ အခြား i9-11900K အခြား Core တစ်ခုကိုမလွှတ်ပါနှင့်
Rocket Lake Core i9 စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်သည်စျေးနှုန်းညှိနှိုင်းမှုကိုကြာမြင့်စွာတွေ့မြင်နိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။ အရမ်းပူတယ်၊ ဈေးလည်းကြီးတယ်။ ထို့အပြင်အကဲဖြတ်ရန်ခက်ခဲသည်။
ဝက်ဘ်ပေါ်ရှိဝေဖန်သုံးသပ်သူများ၊ ကျွန်ုပ်အပါအ ၀ င်၊ ဒီစတင်မှုသည်ခက်ခဲကြောင်းတွေ့ရှိရသည် သေချာစေရန် AMD သည် BIOS နှင့်လူစိမ်းသို့မဟုတ် pre-release driver ကိစ္စများမဟုတ်ပါ (t၎င်းသည်
) ပရိုဆက်ဆာများဖြစ်သော်လည်းဤအချိန်တွင်အခြေခံစံနှုန်းစစ်ဆေးသူများအနေနှင့်မည်သည့်အရာကကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့ရသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားစောင့်နေသည် ... Alder Lake ။
Intel နှင့်ပတ်သက်သောကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ထို့ကြောင့်ကုမ္ပဏီ၏နောက်ဆုံးပေါ်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် desktop ပရိုဆက်ဆာသည်စမ်းသပ်မှုအနည်းငယ်ရှိခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်တစ်ရက်နှစ်ရက်အကြာမှာတော့ဂျာနယ် o-чөйрကိုဖြတ်ပြီးသဘောတူညီမှုကတော့ဒီဟာက Intel ရဲ့အကောင်းဆုံးဆီလီကွန်နာရီမဟုတ်ဘူး။
Desktop ပရိုဆက်ဆာထုတ်လုပ်သူမှပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်တည်ငြိမ်မှုကိုဂုဏ်ယူကြသည်။ ထို့အပြင်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် Dock ၏ထိပ်တွင်ရှစ်ခုပရိုဆက်ဆာဖြစ်သော Core i9-11900K ကိုစျေးနှုန်းသတ်မှတ်ထားပြီး AMD ကိုအားနည်းစေသည့်အခါတိုင်းဆန့်ကျင်ဘက်ဘက်သို့သွားကာ CPU အားအလွန်အကျွံသုံးစွဲခဲ့သည်။ ပိုမိုမြင့်မားသောစျေးနှုန်းအတွက်၎င်း၏ယခင်ထက်နည်းပါးလာ cores အတူ။ ဆီလီကွန်ထုတ်လုပ်မှုသည်အတားအဆီးဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိပါသည်ယနေ့ခေတ်နှင့်စျေးနှုန်းများမြင့်မားနေသော်လည်းအခြေခံကျသောငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှင့်စျေးနှုန်းတစ်ခုချင်းစီတွင်စျေးနှုန်းများမြင့်တက်နေသလား။ သွား!
Intel သည် desktop PC များ၌ခေါင်းဆောင်မှုနေရာဆုံးရှုံးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ AMD က Desktop ကွန်ပျူတာများကိုစျေးနှုန်းအမြင့်ဆုံးသို့ကျော်တက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့် ပတ်သတ်၍ နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်ပင်ခဲ့သည်။ Core i9-11900K သည် Intel ၏ AMD ၏ဗျူဟာကျသောတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ယခင်ကထက်ပိုမိုအားနည်းချက်ရှိသည့်ဂိမ်းကစားသူများနှင့်အကြောင်းအရာဖန်တီးသူများ၏စိတ်တွင်ပိုမိုအားကောင်းလာစေသည်။
desktop processors များတွင်ကုမ္ပဏီ၏နောက်ထပ်အဖြစ်အပျက်တစ်ခု
မှာဖြစ်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည် 12th gen kernel မထွက်မီ AMD ၏နောက်တွင် lithography တွင်ထည့်ထားသည်။ Intel လုပ်ရန်လိုအပ်သည်မှာဈေးကွက်အနေအထားနှင့်အညီဤအနေအထားကိုအသိအမှတ်ပြုရန်နှင့်စျေးနှုန်းနှင့်အညီလျှော့ချရန်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် Alder Lake သည် A ၏အရာနှင့်မကိုက်ညီကြောင်းသိလျှင်MD သည် Zen4အတွက်ချက်ပြုတ်ခဲ့ပြီးတန်ဖိုးများဂိမ်းကိုခဏတစ်ဖြုတ်ကစားခြင်းသည်သွားနိုင်သည်။ အခြားသော Intel ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေကတော့ gangbusters တွေပဲ။
အစောပိုင်းကောလဟာလများအရ Zen4သည် ၂၀၂၂ အစောပိုင်းတွင် TSMC ၏ 5nm lithography နှင့်ထုတ်လွှတ်မှုအရောင်များအပေါ်အခြေခံလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီး Alder Lake အား ၂၀၂၁ နှင့်နောက်ပိုင်းတွင်တိုက်ခိုက်မှုများကိုပိုမိုခိုင်မာစေရန် Intel အတွက်ပါးလွှာသော ၀ င်းဒိုးတစ်ခုပေးလိမ့်မည်။
Intel တွင်လမ်းရှည်တစ်ခု (ကဒ်) ရှေ့တွင်ရှိနေသည်။ အကယ်၍ Intel ကဤတစ်ကြိမ်တွင်ဤသို့မပြုလုပ်ပါက၎င်းသည်၎င်း၏ chipbank ကိုကောင်းစွာတန်ဖိုးမထားပါက၊ ကုမ္ပဏီ၏ယခုနှောင့်နှေးမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကုမ္ပဏီ၏နှောင့်နှေးမှုက ပို၍ ကြီးမားသည်။
အခုကုမ္ပဏီရဲ့စီအီးအိုအသစ်နဲ့အတူကုမ္ပဏီရဲ့အွန်လိုင်းဖွင့်ပွဲမိန့်ခွန်းဟာအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောနေတာမှန်ပါတယ် ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်၎င်း၏လမ်းပြမြေပုံကိုသေချာစွာတင်ပြနေစဉ်အချိန်ဇယားနောက်ကွယ်ရှိကြောင်းပွင့်လင်းစွာဝန်ခံခဲ့သည်။ လမ်းကြောင်းအတွက်ပြန်လာမယ် သို့သော်၊ အကယ်၍ ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် "လမ်းပြမြေပုံပြိုကွဲရန်ရည်ရွယ်သည်" ဆိုသည့်စကားလုံး၏ကလေးဆိုလျှင်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းက Intel ဖြစ်သည်။ Intel ၏အသစ်စက်စက်များတည်ဆောက်ခြင်းသို့မဟုတ် (ဘိလပ်မြေအားလုံးခြောက်သွေ့ခြင်းမရှိမီ) 10nm သို့ပြောင်းရန် Intel ၏တိုးတက်မှုသည် AMD ကိုပြင်ပတွင်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသည့်အနေအထားသို့ပြန်ရောက်ရန်လုံလောက်မှုရှိပါသလား။ -Zen? အချိန်ကသာပြောပြလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထင်မြင်ချက်မှာ Rocket Lake သည်ဖြည့်သည့်ပုံစံဖြစ်သည်၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင်ယခုအကြိမ်သည်၎င်းသည်စစ်တုရင်ဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်ရန်လိုသောတိုးတက်မှုတစ်ခုလားသို့မဟုတ်မျှော်စင်၏နှစ် ဦး နှစ်ဖက်လှုပ်ရှားမှုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့သိသင့်သည်။
Intel Core i9-9900k vs AMD ryzen93900x: ဘယ်အဆင့်မြင့်ပရိုဆက်ဆာကိုဝယ်မည်နည်း။
2021-04-18 22:25:33 | ပရိုဆက်ဆာများ...
၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် Ryzen9ပရိုဆက်ဆာများစတင်ရောက်ရှိလာချိန်တွင် AMD သည် Intel ၏ပြိုင်ဘက် Core i7 နှင့် Core i9 ချစ်ပ်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းကိုတိုးချဲ့ခဲ့သည်။ အကယ်၍ သင်သည်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်၊ mainstream desktop processor ကိုရှာဖွေနေပါက Ryzen9နှင့် Core i9 နှစ်ခုစလုံးသည်ဆွဲဆော...
ဘာ? ၅၆၀၀x AMD ၏ ryzen သည်ဒေါ်လာ ၃၆၉ ကုန်ကျမည်လော။
2021-04-18 15:37:55 | ပရိုဆက်ဆာများ...
(Credit: Micro Center) အကြောင်းပြချက်အချို့ကြောင့်အီလက်ထရွန်းနစ်လက်လီအရောင်းကိုယ်စားလှယ် Micro Centre ကသင့်အား AMD ၏ Ryzen 5600X ပရိုဆက်ဆာကိုပိုင်ဆိုင်ရန်အပိုထပ်ဆောင်းစေလိုသည်။ PC တည်ဆောက်သူများက Micro Center သည်ရေပန်းစားသည့်ပရိုဆက်ဆာကိုဒေါ်လာ ၃၆၉ ဖြင့်ရောင်းချနေသည်ကိုသတိပြုမိသည်။ $ 299 ၏စျေးနှုန်း။...
ပို့ကုန်ကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဖြင့် Exascale စူပါကွန်ပျူတာပေါ်တွင်တရုတ်၏လုပ်ဆောင်မှုကိုတားဆီးရန်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးစားနေသည်
2021-04-11 08:17:14 | ပရိုဆက်ဆာများ...
အမေရိကန်အစိုးရသည်တရုတ်၏၎င်း၏“ exascale” စူပါကွန်ပျူတာတည်ဆောက်ခြင်းကိုတားဆီးရန်လမ်းပိတ်ဆို့မှုများကိုရုပ်သိမ်းပေးခဲ့သည်။ ကြာသပတေးနေ့တွင်အမေရိကန်စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ၀ န်ကြီးဌာနသည်တရုတ်နိုင်ငံရှိချိတ်ဆက်ထားသောစူပါကွန်ပျူတာစင်တာ (၄) ခုသို့ပို့ကုန်ထိန်းချုပ်မှုများကိုချမှတ်ခဲ့သည်။ အဓိကအမေရ...
Intel Core i5-11600k ပရိုဆက်ဆာပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
2021-04-03 06:56:50 | ပရိုဆက်ဆာများ...
Intel ၏အသစ်ထုတ်လုပ်သော (၁၁) မျိုးဆက် (Rocket Lake) Desktop Processor များကိုစတင်မိတ်ဆက်လိုက်ခြင်းသည် Core-i5-11600K (ဒေါ်လာ ၂၆၂) ၆-core / 12-thread Core (တည်ငြိမ်မှုအချို့) ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ Rocket Lake လွှတ်တင်ခြင်း၏ပထမဆုံးနိမိတ်မှာအချိန်မတန်မီပြန်လည်ရောင်းချသူများနှင့် Core i7-11700K ချစ်ပ်ကိုလွန်...
Intel Core i9-11900k ပရိုဆက်ဆာပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
2021-04-03 06:53:20 | ပရိုဆက်ဆာများ...
$ 539 Intel Core i9-11900K desktop processor ကိုဆီလီကွန်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပါသလား။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဆိုလိုတာက ၂၀၂၁ ခုနှစ်မှာတိုးချဲ့လိုက်ခြင်းအားဖြင့် Intel ကအကြံပြုထားတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ရှာရတာခက်လို့ဆိုလိုတာလား။ အလွန်ဖြစ်နိုင်သည်။ high-end အစိတ်အပိုင်းပစ္စည်းဝယ်လိုအားယနေ့ခေတ်တော်တော်များများဖုတ်နေသည်။ ထို့ကြောင့...
Intel: Rocket Lake ပရိုဆက်ဆာများသည် AMD နှင့်အပြိုင်အဆိုင်မပြင်းထန်မီအစိမ်းရောင်ထွန်းလင်းခဲ့သည်
2021-04-02 01:40:52 | ပရိုဆက်ဆာများ...
(Credit: Intel) Intel ရဲ့အံ့သြစရာမကောင်းလောက်တဲ့ Rocket Lake ပရိုဆက်ဆာတွေဘာကြောင့်တည်ရှိနေတာလဲလို့စဉ်းစားမိရင်၊ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်က chipmaker ကပြိုင်ဘက် AMD နဲ့ယှဉ်ပြိုင်မှုနည်းလာတဲ့အချိန်မှာကုမ္ပဏီဟာဒီပရိုဆက်ဆာတွေကိုဖွင့်ထားကြောင်းသိရပါ။ Reddit Ask Me Anything , Intel က၎င်းသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်ပထမသုံးလပတ်...
ARM သည် Armv9 ဗိသုကာနှင့်လမ်းပြမြေပုံကိုတင်ပြသည်
2021-03-31 14:43:59 | ပရိုဆက်ဆာများ...
ကာကွယ်ဆေးထိုးသည့်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မှသည်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများ၊ မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ရှာဖွေရေးစနစ်များနှင့်အလုပ်ခွင်သို့လုံခြုံစွာပြန်လာနိုင်သည့်နည်းပညာများအထိ ARM ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Simon Segars သည်လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်အတွင်းကုမ္ပဏီ၏ပထမဆုံး IT ဗိသုကာအသစ်ဖြစ်သော Armv9 ကိုအသုံးပြုမှုအကြိမ်မျာ...
Intel Rocket Lake ပရိုဆက်ဆာ၏စျေးနှုန်းများပေါက်ကြားခဲ့ဖွယ်ရှိသည်။ core i9-11900k ကိုဒေါ်လာ ၅၉၉ ဖြင့်ရောင်းချသည်
2021-03-29 04:55:41 | ပရိုဆက်ဆာများ...
(Credit: Intel) Wisconsin ရှိ Milwaukee ရှိ PC ရောင်းချသူသည်လာမည့်လမတိုင်မီ ၁၁ ကြိမ်မြောက် Intel Core "Rocket Lake" ပရိုဆက်ဆာများအတွက်စျေးနှုန်းကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ Milwaukee PC သည်ရောင်းချမည့်လာမည့် desktop desktop ကိုမတော်တဆတင်ပို့လိုက်သည်။ သောကြာနေ့တွင်တွစ်တာအသုံးပြုသူ "@ harukaze5719" မှသတိပြုမ...
2021 မှာ Laptop Processor ကိုဘယ်လိုရွေးရမလဲ
2021-03-25 19:41:56 | ပရိုဆက်ဆာများ...
Laptop တိုင်း၏ဗဟိုတွင်ဗဟိုဖြစ်စဉ် (CPU) သည်အတွင်း၌ဖြစ်ပျက်သမျှအရာအားလုံးအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ Laptops တွင်တွေ့ရသောပရိုဆက်ဆာများကို (“ processors” ဟုလည်းခေါ်သည်) AMD, Apple, Intel နှင့် Qualcomm တို့ကပြုလုပ်သည်။ အဆိုပါရွေးချယ်စရာများအဆုံးမဲ့ပုံရသည်နှင့်သူတို့၏အမည်များ, ဘိုင်ဇင်တိုင်း။ ဒါပေမယ့်သင်ရွေးလိုက...
Intel ၏ 7nm PC ချစ်ပ်သည် ၂၀၂၃ ခုနှစ်တွင် tsmc နည်းပညာကိုအသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်
2021-03-25 04:48:02 | ပရိုဆက်ဆာများ...
(Credit: Intel) Intel ၏ပထမ ဦး ဆုံး 7-nanometer PC ကွန်ပျူတာချစ်ပ်သည် ၂၀၂၃ တွင်လာမည်။ Intel ကုမ္ပဏီ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Pat Gelsinger ကမူ ၂၀၃၃ ပရိုဆက်ဆာလမ်းပြမြေပုံတွင်အင်္ဂါနေ့ကအပြိုင်အဆိုင် AMD ၏နောက်ခံဖြစ်သော TSMC မှထုတ်လုပ်မှုကိုအသာပုတ်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ပါဝင်ပါသည်...
Intel Alder Lake ပရိုဆက်ဆာသည် pcie 5.0, ddr5 ram ဖြစ်သည်
2021-03-23 02:16:57 | ပရိုဆက်ဆာများ...
(Credit: Intel) Intel ၏“ Rocket Lake” Desktop Processor များကိုလာမည့်သီတင်းပတ်တွင်တရားဝင်ဖြန့်ချိမည်။ သို့သော်ထိုအချိန်တွင်ကုမ္ပဏီ၏နောက်ထပ်ချစ်ပ် "Alder Lake" ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များပေါက်ကြားနေပုံရသည်။ VideoCardz သည် laptop ၏ချစ်ပ်များနှင့် desktop ပရိုဆက်ဆာများပါ ၀ င်မည့် Alder Lake တွင် Intel ၏တင်ဆ...
Intel Rocket Lake ပရိုဆက်ဆာ၏စျေးနှုန်းများပေါက်ကြားခဲ့ဖွယ်ရှိသည်။ အဓိက i9-11900k ကိုဒေါ်လာ ၅၉၉ သတ်မှတ်ထားသည်
2021-03-20 00:49:53 | ပရိုဆက်ဆာများ...
(Credit: Intel) Wisconsin ရှိ Milwaukee ရှိ PC ရောင်းချသူသည်လာမည့်လမတိုင်မီ ၁၁ ကြိမ်မြောက် Intel Core "Rocket Lake" ပရိုဆက်ဆာများအတွက်စျေးနှုန်းကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ Milwaukee PC သည်ရောင်းချမည့်လာမည့် desktop desktop ကိုမတော်တဆတင်ပို့လိုက်သည်။ သောကြာနေ့ကတွစ်တာအသုံးပြုသူ "@ harukaze5719" မှသတိပြုမိသေ...
အသစ်စက်စက် Mac မရှိတော့ပါ။ intel ကြေငြာချက်များတွင် windows pc များအတွက်ပန်းသီးမြောင်းရှည်များ
2021-03-18 01:20:42 | ပရိုဆက်ဆာများ...
(Credit: Intel) Justin Long သည် Apple's 'GetaMac' ၏ကြော်ငြာတွင်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး Windows PC များကိုတိုးမြှင့်ခြင်းတွင် Intel နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် Intel သည် Windows PC များ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုတိုးမြှင့်သည့် Long ကြော်ငြာခြင်းရှိဗီဒီယိုကြော်ငြာငါးခုကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ Apple ရဲ့...
လက်လီရောင်းချသူများသည် Intel's Rocket Lake Processor များအတွက်ကြိုတင်မှာယူမှုစျေးနှုန်းကိုမြင့်တက်စေသည်
2021-03-17 04:40:22 | ပရိုဆက်ဆာများ...
(Credit: Intel) အနာဂတ် Intel "Rocket Lake" ပရိုဆက်ဆာများအတွက်ကြိုတင်မှာယူမှုများသည်ယနေ့တွင်စတင်နေပြီဖြစ်ပြီးသင်ဝယ်ယူရန်စီစဉ်နေပါကစျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပါ။ AMD ၏ယှဉ်သော Ryzen 5000 ပရိုဆက်ဆာများထက်၎င်းတို့ကို ပို၍ စျေးကြီးစေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ Rocket Lake ၏အင်အားအကောင်းဆုံးပရိုဆက်ဆာဖ...
Intel ၏ rocket lake cpus သည်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် AMD ကိုအောင်မြင်ရန်ကြိုးစားလိမ့်မည်
2021-03-16 16:27:45 | ပရိုဆက်ဆာများ...
(Credit: Intel) Intel ၏ "Rocket Lake" desktop ပရိုဆက်ဆာများရောက်လာသည့်အခါ AMD ၏ယှဉ်ပြိုင်သောပရိုဆက်ဆာများကိုအနည်းဆုံးကြီးမားသည့်ဈေးနှုန်းဖြင့်သာကျော်ဖြတ်နိုင်တော့မည်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင် Intel သည်၎င်း၏ Core ပရိုဆက်ဆာများအပြည့်အစုံကိုအသေးစိတ်ကျဆင်းခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့နာရီအမြန်နှုန်း, Core ၏နံပါတ်နှင့်က...